Howlgal Saraakiil Madaxyada Looga Guray Oo Ka Dhacay Muqdisho. – Bogga Calamada.com
Howlgal Saraakiil Madaxyada Looga Guray Oo Ka Dhacay Muqdisho.
Saraakiil ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya waxaa maanta lagu dilay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ka dib howlgal gaar ah oo ciidamo ka tirsan shabaabul Mujaahidiin ay ka fuliyeen gobolka Banaadir.
Howlgalkan gaarka ah waxay ciidamada gaarka ah ee katiibada Maxamed Ibnu maslamah si gaar ah kaga fuliyeen suuqa wayn degmada wadajir ee magaalada Muqdisho waxayna ku dileen labo sarkaal oo ka tirsanaa saraakiisha sare ee ciidamada booliska dowladda xilli ay ku sugnaayeen gudaha suuqa degmada Wadajir.
Ilo wareedyo masuul ah waxay xaqiijiyeen in howlgalka uu u dhacay sidii loo qorsheeyay waxaana halkaas lagu dilay labada sarkaal oo lagu kala magacaabi jiray Xassan Dacar iyo Cali Dahab oo ka wada tirsanaa saraakiisha ciidanka booliska kooxda Farmaajo.
Howlgalkan fariidka ah waxay ciidamada shabaabul Mujaahidiin kusoo ghaniimeysteen baastoolad uu ku hubeysanaa mid ka mid ah saraakiisha la khaarajiyay waxaana goobta si nabdoon kaga dhaqaaqay raggii halyeeyada ahaa ee weerarka fuliyay.
Howlgalkan wuxuu kusoo beegmayaa xilli weerar ka dhacay duleedka degmada Dayniile uu si dirqi ah kaga badbaaday guddoomiyaha maamulka dowladda ugu magacaaban degmada Dayniile ninka lagu magacaabo Maxamed Abuukar Jafcar waxaase howlgalkaas lagu dilay 6 askari oo ka mid ahaa ilaalada Jacfar halka sidoo kalena lagu dhaawacay 8 kale oo ilaaladiisa ka mid ah.